Dib-u-eegista Buugga: 'Haweenka Mucjisada ah' waa Waajib-u-leh Taageerayaasha Naxdinta Caadiga ah
Bogga ugu weyn Buugaag naxdin lehFiction Dib-u-eegista Buugga: 'Haweenka Mucjisada ah' waa Waajib-u-leh Taageerayaasha Naxdinta Caadiga ah
FictionBuugaag naxdin lehWarar Naxdin Leh
Haweenka Cajiibka ah: Khayaaliga Aasaasiga ah ee Sayniska ee Qorayaasha Dumarka ee Dhulka: 1852-1923, taariikh cusub oo sheeko xariir ah oo qabow, ayaa ka soo baxday Ogosto 4, 2020 tifaftireyaasha Lisa Morton iyo Leslie S. Klinger. Waa gebi ahaanba waa inuu lahaadaa kuwa xiiseynaya haweenka ka caawiyay qaabeynta nooca naxdinta.
Ururinta waxaa ku jira in ka badan 20 sheeko oo la yaab leh oo aan caadi ahayn, qaar ka mid ah qorayaasha oo aad shaki ka qabin magacyadooda, iyo kuwa kale oo dhammaantood ku dhacay mugdi ayaa badbaadiyey ka mid noqoshadooda qoraalo iyo uruurinta waqti ka waqti.
Nasiib darro, marar badan sheekooyin sidan oo kale ah ayaa la soo ururiyaa, diiwaanka wuxuu ku dhowaad gebi ahaanba ka kooban yahay qorayaal lab ah oo ay ku jiraan hal ama laba qoraal oo ay soo qorayaan haweenka wax qoraya isla muddadaas. Nasiib wanaag, Klinger iyo Morton waxay go'aansadeen inay ahayd waqtigii loo oggolaan lahaa haweenkan hibada leh inay ra'yigooda dhiibtaan.
Haweenka Cajiibka ah wuxuu ku bilaabanayaa Elizabeth Gaskell's Sheekadii Kalkaalisadii Hore. Waxaa la daabacay 1852, sheekada waxaa u sheegay haweeney da 'yar oo xannaaneysa oo la xiriirta koox carruur ah sheeko murugo leh oo ku saabsan ayeeyadeed markii ay ilmo yar ahayd. Waa sheeko ku habboon in la dejiyo habka loogu talagalay waxaad ka heli doonto inta ka hartay ururinta. Iyadu sidoo kale waa tusaalaha koowaad ee sababta shaqadii haween badan oo qoraa ah waqtigaas loo ceyriyay.
Dhammaantood waxay ku dhex dhacday mugdi markii horaba markii Sayid David Cecil - taariikhyahan iyo aqoonyahan - ka qoray inay tahay "dumar oo dhan" iyo inay samaysay "dadaal lagu kalsoonaan karo si ay uga gudubto cilladaha dabiiciga ah ee ay leedahay laakiin dhammaantood waxtarla'aan." Nasiib darro, faallooyinka noocan oo kale ah ayaa midab dhaliil u ah shaqadeeda ku dhowaad labaatan sano illaa qorayaasha 50s iyo 60s ay bilaabeen inay dib u akhriyaan Gaskell oo ay ku soo gabagabeeyeen in aragtideeda ay ahayd mid ka horraysa dabiiciga ah ee dhaqdhaqaaqa haweenka taas oo sharraxday sababta aad u fara badan. ragga dhaleeceeya horaantii qarnigii 20aad waxay doorteen inay diidaan shaqadeeda.
Markaa waxaa jira qorayaashaas sida Louisa May Alcott oo aad runtii magacyadooda taqaan, laakiin waxaa laga yaabaa inaadan ogeyn inay suulashooda suulinayaan barkad ka sarraysa / naxdin leh waqti ka waqti. Haweenka Little lama dafiri karo shaqadeeda ugu caansan, laakiin Ku lumay Ahraamta; ama, Habaarka Hooyada Laga soo bilaabo 1869 wuxuu Alcott ku dhajiyay khariidadda suugaanta iyada oo ka mid ah haweenkii ugu horreeyay ee qortay sheeko "Habaar Hooyadeed"
Waxaan sidoo kale jeclahay Charlotte Perkins Gilman's Giant Wistaria. Qiyaastii qofkasta oo qaatay heerka koowaad ee koorsada Intro to Lit ee kuleejka waa yaqaan qoraaga Waraaqda Jaalaha ah, laakiin in yar ayaa laga yaabaa inay akhriyaan sheekadan gaarka ah, sheeko cirfiid ah oo ka hadlaysa qaar ka mid ah mawduucyada la midka ah shaqada la yaqaan.
Waxa aan ugu jeclahay ururintan – iyo uruurinta kale ee lamidka ah – waa markii la ii barto shaqooyinka iyo qorayaasha aanan horay u aqrin.
Tusaale ahaan Wer-Wolf waxaa qoray Clemence Housman. Housman wuxuu ahaa qoraa iyo sawirqaade. Waxay sidoo kale dhacdaa inay walaalo tahay abwaanka AE Housman. Sheekadan gaarka ahi waxay soo koobaysaa fikrado badan oo ka mid ah kuwa ka soo horjeeday caqabadaha jinsiga ee waqtiga, iyaga oo ku duuduubaya qabow, laakiin aan la dafiri karin sheeko qurux badan oo ku saabsan dhedig yeroo.
Haweenka Cajiibka ah ugu dambeyntiina waxay u shaqeysaa sheekooyinka iyo qorayaasha ay doorteen Klinger iyo Morton. Waxay soo bandhigaan qayb ka mid ah haweenka daabacay inta lagu gudajiray waqtigaas, iyagoo diiradda saaraya sheekooyinka aan si wanaagsan loo qorin laakiin sidoo kale si dhab ah u cabsi badan. Waxay sidoo kale siiyaan taariikh nololeed kooban qoraa kasta si aad wax badan uga baran karto dumarka cajiibka ah ee ku jira ururintan.
Buuggu wuxuu diyaar u yahay inuu dalbado Amazon by HALKAN HALKAN. Kuma talin karo kugu filan hadaad tahay taageere sheekooyinka waxyaabaha layaabka leh iyo kuwa aan caadiga ahayn.
cilmiyaysanDib u eegista BuugaagtaLeslie S. KlingerLisa MortonWaylon JordanHaweenka Cajiibka ah
John Cusack iyo Hugh Grant Waxay Ku Dhawaadeen Muxaadaro 'Hannibal'
Sam Neill wuxuu si rasmi ah ugu soo laabtay 'Jurassic Park: Dominion'